ओली सरकारले सबैलाई सुख समृद्धि दिएरै छाड्छ » छलफल
ओली सरकारले सबैलाई सुख समृद्धि दिएरै छाड्छ
आनन्दप्रसाद पोख्रेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कृयाशील नेता हुनुहुन्छ । जिल्ला तहदेखि राजनीति गरेरआउनु भएका पोख्रेल पुराना एवम् अनुभवी नेता पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छोड्न सक्ने नेतापोख्रेल पार्टीका ईमानदार एवम् ३ न.. प्रदेशका क्रियाशील नेतामा पर्नुहुन्छ । लेखकको रुपमा समेत चिनिनेपोख्रेल संघीय सरकारको अभियानलाई प्रदेशले हर तरहले सघाउने बताउनुहुन्छ । संघीय सरकार र प्रदेशसरकारका कार्यक्रमका सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आनन्दप्रसाद पोख्रेल, पार्टी सचिव, ३ नं प्रदेश, नेकपा
तपाईं तीन नम्बर प्रदेश नेकपाको पार्टी सचिव हुनुहुन्छ, पार्टी एकताका कामहरू अझै बाँकी छन्, प्रदेश पार्टीका कामहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् बताइदिनुहोस् न ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि पार्टीको विधान, नियामवली, राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रले जारी गर्ने हो । केन्द्रीय विधानले प्रत्यायोजित गरेका अधिकारहरू प्रदेशले सम्पादन गर्ने हो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीति र केन्द्रमा पर्ने प्रभाव प्रदेशहरूको पार्टी एकतामा पर्नु स्वभाविकै हो । यद्यपि, तीन नम्बर प्रदेशमा पार्टीको काम अत्यन्तै छिटो भएको छ । समग्रहमा भन्ने हो भने यो अठार महिनाको दौरानमा पार्टी एकताको काम लगभग टुंगिएको स्थिति हो । थोरबहुत मिलाउनु पर्ने छ । केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, आयोगहरू, विभागहरूको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । प्रदेशका पनि प्रदेश कमिटीहरू बनिसकेका छन्, जिल्लाका पनि कामहरू भइरहेका छन् । त्यस कारण पार्टी एकताले गति लिएको छ । अब हामीले एकीकृत पार्टीबाट कसरी पऋणाम दिने भन्ने काम कारबाहीमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीले २०७५ साल असोज ५ गते प्रदेशको अध्यक्ष, सचिव, ईञ्चार्ज र सहईञ्चाज तोकेको थियो । हामीले असोज १३ गते बैठक बसेर हाम्रा १३ वटै जिल्लामा पहिले बनेको कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला कमिटीले प्रयोग गरेको अधिकार प्रयोग गरी कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीय तहको एकतालाई अगाडि बढाउने भनी निर्देशन गरी त्यसैको प्रकाशमा एकताको काम अगाडि बढेका छन् । जसअनुसार दोलखा, सिन्धुली र रसुवाको पार्टी एकताको काम अगाडि बढेको छ भने अहिले प्रदेशका सबै जिल्ला पार्टी कमिटीको एकताको काम सम्पन्न भएका छन् । यो खुसीको कुरा हो । त्यसैगरी पालिका स्तरका कमिटीहरू पनि क्रमशः एकता हुँदै गइरहेका छन् भने जिल्लाका वडा तहका कमिटीहरू पनि बनिसकेका छन् । तथापि दुई ठूला पार्टीहरूको एकता भएकोले कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो छ, ती सबै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले यसमा चुनौती भएको छ । विभिन्न कारणले पार्टी एकताका कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए तर अहिले अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश कमिटीले प्रत्येक तीन तीन महिनामा बैठक बसाउनु पर्ने विधिअनुसार चौध महिनामा हामीले तीनवटा पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेका छौं । हामीले विधान त बैठकलाई अगाडि बढाएका छौंं । त्यतिमात्र होइन, ७३ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेर ३० वटा विभागका प्रमुख र उपप्रमुख तोकेका छांै । जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गरेका छौंं । यसका साथसाथै कार्तिकदेखि चैतसम्मको छ महिने कार्ययोजना, पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेर पार्टीको कामलाई अघि बढाउने र तीनै तहका सरकारलाई पार्टीको मातहतमा सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढाउने, साँसद र जन निर्वाचित प्रनिधिहरूलाई पार्टीको विधिभित्र, निति निर्देशन भित्र ल्याउनेगरि ६ महिने कार्यक्रम तोकेका छौं । २९ पेजको परिपत्र जिल्ला जिल्लामा पठाई सकेका छौं । त्यतिमात्र होइन, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि जिल्लाहरूमा तालमेल नमिल्ला भनेर आगामी मसिंर २२ गतेबाट पौष ८ गतेसम्म १३ ओटै जिल्लाको बैठक राखेका छौं । त्यो बैठक रसुवा बाट सुरु गरी काभ्रेपलान्चोक बाट अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रदेशले पासगरेर अघिसारेको छ महिने कार्ययोजनालाई कसरी लागु गर्ने र कसरी प्रभावकारि बनाउने भन्ने सोच हामीले बनाएका छौं । यसका साथसाथै प्रदेशले अघिसारेको कार्यक्रमलाई जिल्लाले पनि घनीभूत रूपमा अघि बढाउने र यो कामको केन्द्र विन्दु राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक प्रशिक्षण, सरकार परिचालन र पार्टीसँगको सम्बन्धको कुरालाई बढी महत्वका साथ उठाएका छौं । त्यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं । अर्काे महत्वपूर्ण पाटो अहिले कार्यकर्ताभित्र कामको मूल्यांकन राम्रो भएन, काम गर्न अप्ठ्यारो छ, क्षमताका आधारमा कार्यकर्ताको छनौट भएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यो गुनासो हल गर्न र काम नगरे पनि पार्टीका नेताहरूको नजिक भएपछि काम पाउने जुन वर्तमान स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर १३ वटै जिल्लाका लागि १३ वटा अनुगमन समिति बनाउँदै छौंं । ती १३ वटै समितिलाई एउटा जिल्लामा एक महिनाको काम दिन्छौं । तर ती अनुगमन समितिका नेताहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँदैनौं विभिन्न जिल्लामा पठाएर दुई प्रकारको लकफ्रेम तयार गरेर काममा लगाउँछौं । एउटा सांगठानिक लकफ्रेम तयार गर्छाैं, अर्काे स्थानीय तहको सरकारको मूल्यांकनको लकफ्रेम तयार गर्छाैं र कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्न त्यो दुईवटा मूल्यांकन जिल्ला जिल्लामा भर्न लगाउछौं । त्यो भर्दा पनि हामी दुईवटा प्रक्रिया अपनाउँछौं, एउटा पार्टी संगठनको र विचारको बारेमा र अर्को विकास निर्माणको बारेमा गर्र्छौं । त्यसो गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहमा एउटा गाउँपालिका अध्यक्षसँग बसेर कुरा गर्छौं, उसलाई एउटा फर्म दिन्छौं त्यस्तै उपाध्यक्षलाई फर्म दिन्छौं त्यसमा क्रस कोइसन हुन्छन् त्यसपछि वडा अध्यक्षहरूलाइ पनि त्यो फर्म दिन्छौं । त्यो फर्म भरिसकेपछि सबैलाई राखेर अन्तक्र्रिया गर्छौं । त्यतिमात्र होइन, यही अवधिमा स्थानीय तह दल र स्थानीय तह बोर्ड गठन गर्र्छौं । त्यसलाई पार्टी र जनताको बीचमा अगाडि लाने प्रयत्न गर्र्छौं । त्यसका साथसाथै आम पब्लिकलाई हेएरिङ पनि गर्र्छौं । के भन्छन् त आफूले जिताएको प्रतिनिधिको बारेमा ? यसरी मूल्यांकनको विधि तयार गरेर अगाडि बढाएका छौं । यसर्थ ३ नम्बर प्रदेशले पार्टी निर्माणको बारेमा, पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सांगठानिक प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि अत्यन्त मेहेनतका साथ काम अगाडि बढाएका छौं । यो कामले तलका पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्न र पार्टीको एकीकरणलाई सफल पार्न सहयोग पुग्दछ । यो ढंगले हामीले कामको योजना बनाएका छौं । यही ढंगले हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउँछौं ।
अहिले दुईवटा पार्टीका कार्यकर्ताहरूबीचको अन्तर्मनहरू नमिलेको, अन्तर्घुलित नभएको भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको प्रदेशमा यस्तो समस्या छ कि छैन ?
हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने कार्यकर्ता हौं । द्वन्द्ववाद भनेको छ पनि छैन पनि हो । फरक फरक संस्कृतिबाट आएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा एकीकरण हुँदा समस्या नै छैन भन्दा अवस्तुवादी हुन्छ । त्यसकारण म समस्या नै छैन भनेर दावा गर्दिनँ । यसमा समस्या पनि छन् तर यस्ता समस्यालाई विस्तारै हामीले सामाधान गर्दै आएका छौं । यस्ता समस्यालाई हामी बढ्न दिने छैनौं । पार्टीभित्रका वैमनश्यलाई एकले अर्काको खुट्टा तान्ने तहमा जान दिने छैनौं । फेरि समस्याको सामाधान गर्ने हाम्रो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति पनि छ, हाम्रो आफ्नै पद्धति पनि छ । त्यसलाई हामी आत्मसात गरेर अघि बढ्छौं । सैद्धान्तिक विवाद छ भने सैद्धान्तिक ढंगले हल गर्छौं, सांगठानिक विवाद छ भने त्यहीअनुसार हल गर्छाै, आर्थिक विवाद छ भने त्यहीअनुसार हल गर्छाैं । त्यसकारण यो विवाद ल्याएर पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनौं ।
३ नम्बर प्रदेशमा सरकार र पार्टीबीचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ ?
हामीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग तीनपटक सामूहिक बैठक गरेका छौं । संसदीय दलमा पनि बसेर छलफल गरेका छौं । त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण र सौहाद्रपूर्ण छ । तथापि पार्टीको स्वाभाव र सरकारको स्वाभाव फरक फरक हुन्छ । यस्तोमा पार्टी कार्यकर्ताले, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बुझ्ने तरिका र सरकारले बुझ्ने तरिकामा निकै भिन्नता छन् । त्यो भिन्नताले गर्दाखेरि नै पार्टीको सम्बन्ध र सरकारको सम्बन्धमा फरकपन देखिएको हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सबै कुराहरू अहिले नै पूरा हुनुपर्छ, बजेटजति मेरै जिल्लामा आउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति र मन्त्रीहरूले पनि भोलि आफूलाई बलियो बनाउने गरी बजेट जति आफ्नै जिल्लामा हाल्नुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिबीचको अन्तर्विरोध प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । यसर्थ अन्तर्विरोध छैनन् भन्ने होइन छन् । केही केही मन्त्रीहरूले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने, पार्टी र स्थानीय निकायलाई चाहिँ कम्तीमा छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका मनोवृत्तिहरू देखिएका छन् । हामी आगामी २९ गते ३ नम्बर प्रदेश सरकार र प्रदेश कमिटीबीच वार्ता गर्दैछौं । अहिले देखिएका समस्याहरू र मन्त्रीहरूमा देखिएका व्यक्तिवादी, मपाईंत्ववादी सोचहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, संंस्थागत ढंगले कसरी लाने भन्ने विषयलाई सच्याएर र सुधार गरेर लान पार्टी मेहनतपूर्व लागेको छ । आशा छ यो सच्याइलाई मन्त्री र सरकारले बुझ्ने छन् र ठीक ढंगले अगाडि बढ्ने छन् । अर्को प्रदेश पार्टी कमिटीले विधानमा उल्लेखित राजनीतिक, सांगठानिक, वैचारिक नेतृत्व गरेर विकासको पनि नेतृत्व गर्ने र सरकारलाई पनि गाइड गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउनका लागि अहिले देखिएका समस्यालाई हटाएर हामी ठीक ढंगले सरकारलाई अगाडि बढाउने, सरकारलाई फिडब्याक पनि दिने र सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने काममा पनि लाग्छौं र प्रदेश सरकारले अघि सारेका राम्रा कामहरूको पक्षपोषण पनि गर्छौं । कार्तिक ७ गतेको जिल्ला कमिटीको बैठकमा हामीले प्रदेशलाई धन्यवाद पनि दिएका छौं । धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, ती कार्यक्रमहरूको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकले गरेको छ । तर, केही मन्त्रीहरूको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई चाहिँ निरुपण गर्नु पर्ने चुनौती छ ।
३ नं प्रदेश संघीय सरकारको राजधानी प्रदेश पनि भएको नाताले यसको महत्व अलि बढी नै छ, यही प्रदेश कमिटीको तपाईं सचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईंको पार्टीको सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणलाई सफल पार्न कसरी लागिरहनु भएको छ त ?
पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयनको जुन मूल प्रश्न हो, त्यसलाई यो सरकारले सफलतापूर्वक अगाडि बढाईरहेको छ, त्यसकालागि चाहिने ऐन कानुनहरू निर्माण गरीसकेको छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संविधानले परिभाषित गरेका मौलिक हकलाई कानुनद्वारा सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो, त्यो भएका छन् । यसले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यसमा जनताले अब चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । अर्को संघीय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदादिँदै पनि कृषि, पर्यटन, यातायात, जलश्रोत, उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक पिलरको रूपमा अगाडि सारेको छ । त्यसको मतलब सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाललाई परिभाषित गरेको छ । अहिलेको सरकार विकासको लागि हो, विकास भनेको जनताको खुसीको लागि हो, सुखको लागि हो, मुलुकको समृद्धिको लागि हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको लागि हो । त्यतिमात्र होइन, यो सरकारले मुलुकको उत्पादन र विकास बढाउने कुरामा जोड दिएको छ । तर उत्पादन र विकास बढाउने कुरामा आम सर्वसाधारण जनताको पहुँच र उत्पादनमा समुचित र समन्यायिक वितरणको प्रश्नलाई पनि अहिले जोडतोडका साथ दुवै योजना आयोगले अगाडि सारेको छ । यो विषय नै मूल रूपमा मुलुक समृद्धिको आधार हो । अहिले मुलुकमा ४ वटा चुनौती छन् । पहिलो, पार्टी एकतालाई जोगाई राख्ने, पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने, पार्टी अनुशासनलाई कायम गर्ने र एकमना एकताका साथ बलियो पार्टी बनाउने । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको राष्ट्रियता अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ, त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रियता बचाउने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर सर्वदलीय बैठकले उहाँलाई मुलुक बचाउने अधिकार दिएको छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । मुलुकको सुरक्षा, सम्वद्र्धन, राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न र संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो बनेको छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नदीन पनि केही देशी विदेशी तत्वहरू लागेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानलाई पनि सफलताका साथ पूरा गर्नु पर्ने चुनौती यो सरकारलाई छ । नेपालीको समृद्धिसँग जोडिएका यी चुनौतीलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउने दायित्व ओली सरकारलाई छ । केन्द्र सरकारको आधारभित्र प्रदेश सरकारले पनि समृद्धिको आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना भर्खरै प्रारूप तयार गरेर अगाडि बढ्दैछ । यसर्थ नेकपाको सरकार ठीक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । अहिले उत्तर दक्षिणको नाका खोल्ने कुरा पनि आएको छ । चीनसँग २० वटा विषयमा सम्झौता र समझदारी भएका छन् । त्यसले विकासका लागि ऐतिहासिक अवसरको ढोका खुलाएको छ, दुई देशको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित बनाउने अवसरको सिर्जना भएको छ । यसर्थ संघीय र प्रदेश सरकार स्पष्ट खाकासहित, जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने आँट र हिम्मतका साथ सबैलाई एकताबद्ध बनाउँदै मुलुकको विकास, समृद्धि र जनताको हितमा अगाडि बढेको मैले पाएको छु ।
यहाँले यसो भनिरहँदा कतिपय मान्छेहरू खासगरी विपक्षी दलले नेकपाको सरकारले केही गर्न सकेन, जनताको हित गर्न सकेन, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सशक्त बन्न सकेन, मुलुकको भूमि मिचिँदा केही गर्न सकेन, भनिरहेका छन् नि ?
यी भ्रम सबै पानीका फोका हुन् । सरकार अधिनायकवादी भयो केही गर्न सकेन भनेर विपक्षी दल कराइरहेको छ, म उसलाई सोध्न चाहन्छु हिजो सत्तामा हुँदा तिमीले के के गरेनौ, उद्योग कलकारखाना बेचेनौ कि, मुलुकलाई कुशासनमा लगेनौ कि, नदीनाला बेचेनौ कि, मुलुकको ढुकुटी असंवैधानिक ढंगले सकेनौ कि, विपक्षीलाई अधिनायकवादी चरित्र देखाएनौ कि, आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई ढुकुटी रित्तिने गरी पैसा बाँडेनौ कि, न्यायालयलाई आक्रमण गरेनौ कि, पहिलोलाई अन्तिम, अन्तिमलाई पहिलो बनाएर तिनीहरूबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेनौ कि, संविधानलाई कुल्चिएनौ कि, ऐन कानुन मिचेनौ कि, आफ्नो सत्ता टिकाउन विदेशीको हितमा काम गरेनौ कि, नाकाबन्दी गर्नेसँग हात जोडेर लम्पसार परेनौ कि, के गरेनौ तिमीले ? यो सरकारले त अहिलेको विपक्षीले बिगारेका सबै काम सपारी रहेको छ, रित्तिएको ढुकुटी भरिरहेको छ, उसले लगाएको फजुल ऋण तिरिरहेको छ । यसर्थ मलाई यस्ता भ्रम छर्ने र हल्लाको भरमा हिड्नेको कुनै टिप्पणी गर्नु छैन तर मुलुकको विपक्षी दल भएको नाताले यतिचाहिँ भन्नै पर्छ कि अनावश्यक भ्रम छर्दै हिड्नुको सट्टा रचनात्मक र सिर्जनात्मक विपक्षी बन, मुलुकको राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा परेको बेला देश बचाउने महाअभियानमा साथ देऊ, जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको कदममा सहयोग गर, मुलुक समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ देऊ, बैरी हँसाउने र मुुलुकको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनेको बुई नचढ, भोलि जनताले विपक्षीमा बसेर खोइ के ग¥यौ भनेर प्रश्न उठाउने काम नगर, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन, जनताको हित हुने काम गर भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । जहाँसम्म हाम्रो सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा छ, मुलुकका सबै ठाउँमा गएर बाटोघाटो, पुलपुलेसा, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, यातायात, विमानस्थलको स्तरोन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नका लागि म नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी काम गरेर परिणाममा देखाएर त्यस्ता भ्रमको जवाफ दिन चाहन्छौं, हाम्रो सरकार चाहन्छ । हामी जसले जे जे भने पनि जनता र मुलुकको हितमा काम गरी छाड्छौं, विदेशीसँगको सम्बन्ध समधुर बनाई छाड्छौं । गलत कुराको भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्छौं, त्यो आव्हान हामीले मुलुकभरका हाम्रा एक करोडभन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुकलाई गरिसकेको छौं, यस्ता भ्रममा नपर्न जनतालाई सचेत बनाइसकेका छौं । हाम्रो पार्टीले पनि त्यही कुरालाई जुरुक्कै बोकेको छ, त्यही खालको निर्देश गरेको छ । यो मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा विकासको योजना ल्याउने पार्टी अर्को छैन भन्ने कुरा जनताले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो पार्टीप्रति जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षा बढी र बलियो छ । यसलाई हामी तलबितल हुन दिनेछैनौं, हाम्रो पार्टीले दिने छैन । सरकार र पार्टीको अभियान सफल पार्न, जनता सुखी बनाउन सबै पार्टी पंक्ति एकताबद्ध रूपले लागिरहेका छन् । जुन कुरा आउने १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनले पनि प्रमाणित गर्ने छ ।
सरकारले काम त राम्रै गरेको छ, थुप्रै गरेको छ, देखिने गरी गरेको छ, तर गर्दै गरेन, केही नै भएन, सरकार ठीक ढंगले अगाडि बढेन, पार्टीलाई सरकारले टेरेन, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नु पर्नेमा उल्टो भयो, विधिमा सरकार चलेन भन्ने कुरा बाहिरबाट त आउने नै भयो पार्टीभित्रैबाट पनि आइरहेको छ, विरोधीको भ्रम चिर्ने काममा पनि पार्टी एक ढिक्का भएर जनतासम्म जान सकिरहेको छैन किन ?
यो समस्या कहीँ न कहीँ छ, किनकी पार्टी एकता भएको छ तर मन फरक फरक छ । यसले समस्या भएको छ । अर्को यसैलाई आधार बनाई आत्मकेन्द्रित भएर फरक फरक बहस र छलफलमा भइरहेको छ । अर्को पार्टीकै नेताहरूलाई पनि म आज कहाँ छु र भोलि कहाँ पर्ने हुँ भन्ने चिन्ताले घर गरिरहेको छ, त्यसबाट जोगिन पनि विभिन्न छलछामका कुराहरू हुने, आफू ठाउँ पाउन नेताको फेर समाउँदै हिड्ने, असुरक्षित महसुस गर्ने र त्यसबाट जोगिन अहिले राम्रो काम गरेको सरकारका काम राम्रा छन् भन्दा सरकार बलियो हुने र आफू असफल हुने संकुचित मानसिकताले घर गरेकाहरूको डर, चिन्ता र कुण्ठाले यस्ता क्रियाकलापहरू हुने गरेका छन्, तर, यस्ताको कुनै गुञ्जायस छैन । सरकार र पार्टी जनताको हितमा, मुलुकको हितमा काम गरेरै अगाडि बढ्छ, यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर जनताले विश्वास गरेका छन्, यो विश्वासलाई डग्मगाउन नदिई काममा अगाडि बढ्छ । म त्यस्ता कुण्ठा पाल्ने नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृपया त्यस्ता कुण्ठा नपाल्नुस्, यो हिजो तपाईंलगायत सबैले दुःखले निर्माण गरेको पार्टी हो, निरङ्कुशताका विरुद्ध लडेर, जोगाएर बनाएको पार्टी हो, हामी सबै तपाईंहरूकै साथमा छौं, तपाईंहरू विभाजित नहुनुस्, तपाईंहरूका कारणले पार्टी नबिग्रियोस्, कार्यकर्ता निरास नबनून्, मुलुकलाई विभाजन गर्ने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने काममा नलाग्नुस्, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुस् भनेर नेतृत्व तहमा बस्ने नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
तपाईंलाई काम गर्नमा कुनै समस्या छन् कि छैनन् ? पार्टी र प्रदेश सरकारका बीचमा कुनै समस्या छ कि छैन ?
काम नगर्दा समस्या छन्, कुरा मात्रै गर्दा समस्या छन् तर काम गर्दा कुनै समस्या छैनन् । हामी दुईवटा पार्टी एकीकृत भएर यहाँसम्म आएका छौं । यो प्रदेशमा दुइवटा पार्टीको गन्धसमेत छैन । हामीले सबै काम छलफल र बहस गरेर सौहाद्र्रपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरेका छौं । हामीलाई कसैको असहयोग पनि छैन, सबैको सहयोग नै छ, प्रदेश सरकारसँग पनि हाम्रो समधुर सम्बन्ध छ, पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई हामीले गर्ने कार्यमा कुनै कञ्जुस्याई गर्ने गरेका छैनांै । रचनात्मक सहयोग र सुझाव दिइरहेका छौं, पार्टी हितविपरीतका, सामूहिक स्वार्थविपरीतका र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका काममा हामी सधैँ कडा रूपमा उभिन्छौं, प्रतिवाद गर्र्छौं, देश र जनताका हितमा हुने काममा २४ सै घण्टा लाग्छौं । यो हाम्रो पार्टीको नीति हो, पार्टीले दिएको निर्देशन हो, एउटा पार्टीको सिपाही हुनुको नाताले जसको हामी पालना गर्छौं र काम पनि त्यही ढंगले गरिरहेका छौं ।